I-Geography yamaSulumane kwi-Middle Ages
Emva kokuwa koBukumkani baseRoma ngekhulu lesihlanu, ulwazi oluphakathi kweYurophu malunga nehlabathi elibangqongileyo lwalulinganiselwe kwingingqi yabo kunye neemephu ezibonelelwa ngamagosa enkolo. Ukuhlolisiswa kwekhulu leshumi elinesihlanu nelishumi elinesibhozo kwakungeke kwenzeke ngokukhawuleza nje ukuba bekungenjalo kwiingcali zelizwe lamaSulumane.
Ubukhosi bamaSulumane baqala ukwandisa ngaphaya kwePeninsula yaseArabhiya emva kokufa komprofeti nomsunguli wamaSilamsi, u-Mohammed, ngo-632 AD.
Iinkokeli zama-Islam zanqoba i-Iran ngo-641 kwaye ngo-642 iYiputa yayingaphantsi kolawulo lwe-Islam. Ngenkulungwane yesibhozo, yonke inyakatho ye-Afrika, i-Peninsula yase-Iberia (iSpeyin nePortugal), i-Indiya ne-Indonesi yaba ngamaSilamsi. AmaSulumane ayemiswa eFransi ngokuwayisa kwi-Battle of Tours ngo-732. Noko ke, ukulawulwa kwamaSilamsi kwaqhubeka kwiPeninsula yase-Iberia malunga ne-9.
Malunga ne-762, i-Baghdad yaba yinkunzi yengqondo yombuso kwaye yakhupha isicelo seencwadi ukususela kwihlabathi. Abahwebi banikwe ubunzima beencwadi ngegolide. Ngexesha elide, iBaghdad yaqokelela ubutyebi bolwazi kunye nemisebenzi emininzi yendawo yeGrike namaRoma. U-Ptolemy's Almagest , owawubhekisela kwindawo kunye nokunyakaza kwamaqela asezulwini kunye neJografi , inkcazo yehlabathi kunye ne-gazetteer yeendawo, kwakukho ezimbini zezibhalo zokuqala eziguqulelwe, ngaloo ndlela zigcina ulwazi lwazo zikhona.
Ngeemathala zazo ezininzi, imbono yamaSulumane yehlabathi phakathi kwe-800 no-1400 yayichaneke ngakumbi kunokuba umKristu abe nembono yehlabathi.
Indima yoPhando kwiKoran
AmaSulumane ayengabahloli bezinto eziqhelekileyo ukususela kwiKoran (yokuqala incwadi ebhalwe ngesiArabhu) yayigunyazisa uhambo (hajj) eMecca kubo bonke abesilisa abanobuchule ubuncinane kanye kanye ebomini babo.
Ngamawaka ahamba ukusuka kwiindawo ezikude zobukhosi bamaSilamsi ukuya eMecca, kukho izikhokelo ezininzi zokuhamba ezibhaliswe ukuza kuncedisa uhambo. I-pilgrimage ngexesha lesikhombisa ukuya kwinyanga yeshumi yekhalenda yamaSilamsi unyaka ngamnye iholele ekuqhutyweni phambili ngaphaya kwe-Peninsula yase-Arabia. Ngenkulungwane yeshumi elinanye, abahwebi bamaSilam bahlolisise ulwandle olusempuma ye-Afrika ukuya kuma-degree angama-20 e-Equator (kufuphi neMozambique).
I-geography yamaSulumane yayiyinxalenye yokuqhubela phambili ukufundiswa kwamaGrike kunye namaRoma awayelahlekileyo kwi-Yurophu yaseYurophu. Kwakukhona ezinye izongezo kwi-collective knowledge yabo, ngokukodwa i-Idrisi, i-Ibn-Batuta kunye no-Ibn-Khaldun.
I-Idrisi (nayo iguqulelwe njengo-Edrisi, 1099-1166 okanye i-1180) yakhonza uKumkani Roger II waseSicily. Wayeyisebenzela ukumkani ePalermo waza wabhala i-geography yehlabathi ebizwa ngokuba yi- Amusement for Him Whos Desire to Visit Around the World engakhange iguqulelwe kwisiLatini kwaze kwaba ngo-1619. Wayekwazisa ukuba umda wehlabathi ube ngamayela angama-23,000 ( ngokwenene 24,901.55 mayela).
Ibn-Batuta (1304-1369 okanye 1377) yaziwa ngokuba yi "Muslim Marco Polo." Ngo-1325 wahamba waya eMecca ukuze ahambe uhambo kwaye ngoxa kwakukho isigqibo sokunikela ubomi bakhe ukuhamba.
Phakathi kwezinye iindawo, watyelela e-Afrika, eRashiya, eIndiya naseTshayina. Wayekhonza uMlawuli waseTshayina, uMlawuli waseMongol, kunye neSultan yeSultan kwiindawo ezahlukeneyo zezopolitiko. Ngethuba lobomi bakhe, wahamba malunga neekhilomitha ezingama-75 000, ebudeni bexesha elide kunokuba ngubani na umntu ehlabathini. Wayeyichaza incwadi eyayiyi-encyclopedia yezenzo zamaSilamsi ehlabathini lonke.
I-Ibn-Khaldun (1332-1406) yabhala imbali epheleleyo yehlabathi kunye nejografi. Waxoxela ngemiphumo yommandla wabantu kangangokuthi uyaziwa njengenye yezinto zokuqala zokusingqongileyo. Wayevakalelwa kukuba ukugqithisa okumantla nakumazantsi kumhlaba kwakungaphantsi.
Imbali Yembali yeSoloji yeScholarship
Ngokuguqulela imibhalo ebalulekileyo yamaGrike neyabaseRoma kunye nokunikela ekufundeni ihlabathi, abaphengululi bamaSulumane bancedisa ukubonelela ngolwazi oluye lwavumela ukufunyanwa nokuhlolisiswa kwehlabathi elitsha ngekhulu elineshumi elinesihlanu nelishumi elinesibhozo.
Ukwahlukana, i-Diffraction kunye neMgaqo-siseko
UGloria kwi-Excelsis Deo: Iingoma kule Ncwadi yeKrisimesi yamandulo
Fumana i-Diploma yakho ye-High School
Ukudibanisa ne-Archangel i-Metatron, i-Angel of Life
Imfazwe Yehlabathi II: USS Yorktown (iCV-5)
Yintoni efanelekileyo UMSEBENZI wokuBhala?
Uluhlu lweNcwadi yeKhoontz
Uluhlu lweeLatin eziQinisekisiweyo
Igunya likaYesu libuzwa (Marko 11: 27-33)
IPancho Villa, uMongameli waseMexico